Wifi အဝေးထိန်းခလုတ် မီးခလုတ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုပါရှိသော Wifi အဝေးထိန်းအလင်းခလုတ်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertekwith CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်၊ သင်သည် WIFI စမတ်ခလုတ်ကို မည်သည့်ပမာဏမဆို ယူနိုင်သည်။US/AU Smart Life Alexa Google။
2 နှစ်အာမခံဖြင့် Discount Wifi Remote Control Light Switch ကိုဝယ်ယူပါ။
1. Wifi အဝေးထိန်းခလုတ် အလင်းခလုတ်၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
2. Wifi အဝေးထိန်းခလုတ် အလင်းခလုတ်အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
- hub/gateway မလိုအပ်ပါ၊ wifi router သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
- ဖုန်းရှိ Smart Life အက်ပ်ဖြင့် ဘယ်နေရာမှမဆို အဝေးထိန်းစနစ်။
- Alexa/Google Home ဖြင့် အသံထိန်းချုပ်မှု၊ လက်လွတ်ဖြင့် ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းပါ။
- Tempered glass panel ၊ ရေစို/ရှင်းလင်းရန် လွယ်ကူ/မမှေးမှိန်ခြင်း။
- ပျော့ပျောင်းသောအနီရောင် / အပြာ Led ညွှန်ပြချက်, အမှောင်ထဲတွင်ခွဲခြားထားသည်။
- အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ထိတွေ့ခလုတ်၊ မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ နှောင့်နှေးမှုမရှိပါ။
Wifi Remote Control Light Switch ၏ ရှင်းလင်းချက်
ထုတ်ကုန်အမည် Wifi အဝေးထိန်းခလုတ် မီးခလုတ်
မော်ဒယ် ZC-WIFI601 ZC-WIFI602 ZC-WIFI603 ZC-WIFI604
ထိန်းချုပ်ဂိုဏ်း ၁ ဂိုဏ်း ၁ လမ်း ၂ဂိုဏ်း ၁လမ်း ၃ဂိုဏ်း ၁လမ်း ၄ ဂိုဏ်း ၁ လမ်း
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 110V-240V AC
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ Null နှင့် Live Line/Single Live Line
တစ်သက်တာ 1000000 ကြိမ်
အသားတင်အလေးချိန် 0.2 ကီလိုဂရမ်
ထိန်းချုပ်မှု APP အဝေးထိန်းခလုတ်/ လက်ဖြင့်ထိခြင်း/ အဝေးထိန်းခလုတ်
Processing ချစ်ပ် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာ အသိဉာဏ်ရှိသော MCU ချစ်ပ်ကို တင်သွင်းသည်။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေးမြင့် ဖန်သားပြင်၊ ABS မီးငြှိမ်းသတ်ဆေးထိုးမှ တင်သွင်းသည့် ပစ္စည်း
hot Tags:: Wifi အဝေးထိန်း မီးခလုတ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်